माओवादी केन्द्र डडेल्धुराः २२ वडामा सम्मेलन सकियो, कुन वडामा को अध्यक्ष? - Unity Khabar
माओवादी केन्द्र डडेल्धुराः २२ वडामा सम्मेलन सकियो, कुन वडामा को अध्यक्ष?
✍️ ललित बाेहरा	 प्रकाशित मिति : ५ मंसिर २०७८, आईतवार १२:४५
डडेल्धुरा: नेकपा (माओवादी केन्द्र) डडेल्धुराले २२ वटा वडामा सम्मेलन सम्पन्न गरेको जनाएको छ । वडा सम्मेलनमार्फत माओवादी केन्द्र डडेल्धुराले २२ वडामा नयाँ नेतृत्व समेत चयन गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) डडेल्धुराले जनाएको छ । वडा सम्मेलन ३० वडामा जारी नै रहेको छ ।
कुन वडामा को अध्यक्ष?
७ स्थानीय तह रहेको डडेल्धुरामा नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिले एक मात्र स्थानीय तह अजयमेरु गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिहेको छ । अजयमेरुमा ६ वटै वडाको वडा सम्मेलन गरिसकेको माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटी सदस्य तथा गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशप्रशाद भट्टले बताए । क्रःमस वडा नम्बर १ मा मनोरथ भट्टको अध्यक्षतामा २९ सदस्य समिती चयन गरेको छ। वडा नम्बर २ मा यादव चुनाराको अध्यक्षमा २९ सदस्य समिती चयन गरेको छ ।यस्तै वडा नम्बर ३ मा शेर साउँदको अध्यक्षतामा २९ सदस्य समिती चयन गरेको छ । भने वडा नम्बर ४ मा जोगराज ऐर, ५ मा करन बिष्ट, ६ मा केशब राज पन्तको अध्यक्षतामा २९ सदस्य समिती चयन गरेको नेता गणेश पाण्डेयले बताए ।
उनका अनुसार गाउँपालिका सम्मेलन यही मंसिर १८ गते तोकिएको छ । अर्को माओवादीको पकड क्षेत्र मानीने जिल्लाको भित्र मदेश क्षेत्रमा मा पर्ने परशुराम नगरपालिकामा ८ वडामा वडा सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । यो समाचार तयार पर्दासम्म ८ वटा वडाको सम्मेलन सकिएको हो । जस अनुसार वडा नम्बर १ मा शिवराज विक, २ मा डम्बरबहादुर साउँद, ३ मा शेर धामी, ४ मा कृष्ण जैसी, ५ मा धर्मराज ओझा, ६ मा धनबहादुर धामी, ७ मा कर्ण सह धामी र ८ मा बिर्खबहादुर धामीको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय समिती चयन गरेको नगर समिती संयोजक शेरसहि मालले बताए । बाँकी रहेका वडाका अधिवेशन ८ गते सकिने उनले बताए ।
यता आलिताल गाउँपालिकामा २ वटा वडामा सम्मेलन सम्पन्न गरिएको छ । जस अनुसार वडा नम्बर ४ मा चन्द्र जनाल र ७ मा अध्यक्ष बाहेक २९ सदस्यीय समिती सहित पदाधिकारी चयन गरेको माओवादी केन्द्र डडेल्धुराका कार्यालय सचिव करन साउँदले बताए । आलितालमा पालिका सम्मेलन यही मंसिर १२ गते गर्ने मितीसमेत तोकिएको छ । नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा खडक बहादुर बिष्टको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय समिती चयन भएको छ । अन्यमा जारी छ । पालिका सम्मेलन १३ गते तोकिएको नेता लक्ष्मी धिक्तले बताए ।
भागेश्वर गाउँपालिकाका ४ वडाले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । पालिका १ नम्बरमा महेश साउँद, २ मा मिन बाहेरा, भुवन महर, ४ मा दानबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय समिटी गठन गरिएको बिद्यार्थी नेता सन्तोष भट्टले बताए । वडा नम्बर ५ मा यो समाचार तयार पर्दा जारी छ । जिल्ला सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले २ वडामा सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । वडा नम्बर १० गोबिन्द भट्ट, ११. अन्तराम सार्कीको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय समिती चयन गरेको छ । नगरपालिका सम्मेलन १४ गते हुने नेता यादव ओझाले बताए ।
गन्यापधुरा गाउँपालिमा सम्मेनल ७ गतेदेखी सुरु भई ९ गते सकिन १५ गते पालिका सम्मेलन हुने भएको छ । माओवादी केन्द्र डडेल्धुरा जिल्लामा संगठीत सदस्य ६ हजार रहेको केन्द्रको दाबी छ । ७ पालिका मध्ये पशुराम नगरपालिका सबै भन्दा बढी २६ सय संगठीत सदस्य रहेको जिल्ला समितीले बताएको छ।